गर्मी मौसममा के खाने ? स्वस्थ रहन जान्नै पर्ने कुराहरु
ramkrishna February 10, 2021	गर्मी मौसममा के खाने के नखाने ? स्वस्थ रहन जान्नै पर्ने कुराहरु
गर्मी महिना शुरु भएको छ । गर्मी महिनामा आफ्नो हात र शरिरका विभिन्न अंगको सफाईमा ध्यान दिनु पर्छ । गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन, भोक नलाग्नु र धेरै पसिना आउने कारण शरिरको तापक्रम साधारण हुँदैन र थुप्रै रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले गर्मिमा आवश्यकता अनुसार पानी पिउनै पर्छ । यो स्थितीबाट बच्नका लागि आफ्नो खानपिनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । गर्मी मौसममा खानुहोस् यी खानेकुरा, जसले तपाईलाई शरिरमा पानीको कमी हुनदिने छैन र स्वास्त राख्ने छ ।
यस गर्मि मौसममा आफूलाई ताजा र स्वास्थ्य राख्नका लागि धेरै प्रकारका जुस र चिसो पेय पदार्थको सेवन गरिन्छ । यस्तोमा तपाई बेलको जुस पिउन सक्नुहुन्छ, तपाईको शरीरलाई अचुक फाइदा मिल्छ । बेलले स्वास्थ्यका साथै सौन्दर्यलाई निखारर्ने पनि काम गर्छ । आयुर्वेदमा बेललाई गुणको खानी बताएइन्छ । बेलबाट पाइने प्रोटिन, बिटा–क्यारोटिन, थायमिन, राइबोफ्लेभिन र भिटामिन सी निक्कै गुणकारी हुन्छ । नियमित रुपमा बेलको जुस पिउने गर्नाले ग्यास, अपच र कब्जियतको समस्याबाट राहत मिल्छ । कोलस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रित राख्न मद्धत गर्दछ । बेलको रसले पखाला नियन्त्रणमा लाभदायक हुन्छ । बेलको रसलाई सख्खर वा चिनीसँग मिलाएर पिउने गर्नाले पखाला रोकिन्छ । बेलको जुस पिउने गर्नाले शरीरमा गर्मीको प्रभाव हुँदैन, शरीरलाई भित्रै देखि चिसो राख्दछ । साथै यसले एसिडिटीलाई पनि भगाउँदछ ।
Previous Previous post: सेयर बजार भनेको के हो ? के सेयर बजार जुवा घर हो?
Next Next post: कस्ता युवती कति भाग्यशाली हुन्छन ? जान्नुहोस